Hetsi-panoherana Shinoa tamin’ny famoretana ny BBS · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2018 3:12 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Martsa 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Sary: 18-03-2005. Andro Fetin'ny SMTH BBS ao amin'ny Community.webshots.com
Nitatitra tao amin'ny China Digital Times i Xiao Qiang fa nanao hetsi-panoherana tamim-pahavitrihana an-tserasera – ary tamim-pilaminana kokoa ivelan'ny aterineto ireo mpianatra Shinoa- taorian'ny nanombohan'ny manampahefana Shinoa nametra ny fahafahana miditra amin'ireo famoaham-baovao an-tserasera manan-danja sasany ao Shina. Hoy i Xiao raha nitatitra :
Ny 16 Martsa 2005, voafetra ho an'ireo mpisera manana IP ao anatin'ny oniversite irery ihany ny sasany tamin'ireo BBS (Bulletin Board System ~lahatsoratry ny rafitra fafana) Oniversite manan-danja indrindra ao Shina, anisan'izany ny an'ny Oniversiten'i Tsinghua (smth.org), ny Oniversiten'i Peking (ytht.org) ary ny Oniversiten'i Nanjing (lilybbs.org). Midika izany fa tsy afaka miditra amin'ireo BBS ireo intsony ireo daholobe mpisera izay mandray anjara mavitrika amin'ny resaka. Talohan'izany dia nampiantrano ireo sehatra fifanakalozan-kevitra mavitrika ho an'ny daholobe ary nahasarika mpitsidika voasoratra anarana an-tapitrisany anatiny sy ivelan'ny oniversite ny BBS. Nisy ny hetsi-panoherana natao nanerana ireo Oniversite Shinoa. Niantso izany ho fanevatevana ny fahalalaham-pitenenana ny olona, ​​saingy tsy ela dia nesorina ny lahatsoratr'izy ireo ary notsetseman'ny tompon'andraikitry ny oniversite ny feon'izy ireo.
Vakio ny tatitra feno momba ny antsipiriany rehetra.
Mahaliana, efa misy ny fanamarihana technorati FANAVAOZAM-BAOVAO: fipaingorana Technorati tsara kokoa .
Ho an'ireo izay tsy afaka mamaky ny bilaogy Shinoa dia mitatitra ny tantara rehetra i Danwei . Mitatitra ny tranga ihany koa i Fons Tuinstra.
Toa seriny ireo gazety mitantara ny Vary Condi ka tsy mbola niraharaha momba ity tantara ity izy ireo.
FANAVAOZAM-BAOVAO: Nanana ity fanehoan-kevitra ity i Isaac Mao:
Nosoratako tao amin'ny CNBlog fa tsy hoe eo andalam-pahafatesana ihany ny BBS ao Shina amin'ny varavarankely lehibe mba ahitana ny feon'ny besinimaro ao Shina, fa toy izany ihany koa ireo foiben-tolotra fampiantranoana bilaogy. Tena mora tokoa ho an'ny governemanta ny manakana sy mibaiko azy ireo hakatona. Faly aho mahita fa maro ireo mpisera amin'ny aterineto sy bilaogera no nahatsapa izany ary nifindra nankany amin'ny vahaolana amin'ny famahanana bilaogy azo zaraina bebe kokoa.
Saingy ny zavatra mahatsikaiky iray hafa dia mandidy ny tranonkalan'ny aterineto rehetra mba hisoratra anarana (anisan'izany ny tranonkala manokana) [amin'ny alàlan'ny zheng] ny governemanta Shinoa. Raha manana tranonkala fampiantranoana ao Shina ianao, ohatra ny abc.com, dia tokony hosoratana ao amin'ny fitoeran'angondrakitry ny governemanta Shinoa aloha izany voalohany indrindra. Te-hifehy ny aterineto iray manontolo izy ireo amin'izany fomba izany, saingy heveriko fa hadalana tanteraka izany satria tsy takatr'izy ireo hoe hatraiza ny halehiben'ny habaka ary hanafotra ny ezaka tsy misy fotony ataon-dry zareo ny fipoahan'ny tontolon'ny aterineto hiroborobo.